16 TAONA ATY AORIANA Nahazo Politikam-pirenen’ny kolontsaina vaovao isika – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 3:00
Hirosoana ny fametrahana ny Satan'ny mpanakanto matihanina
Accueil/Kolontsaina/16 TAONA ATY AORIANA Nahazo Politikam-pirenen’ny kolontsaina vaovao isika
Nankatoavin’ny teo anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana ny Politikam-pirenena momba ny kolontsaina vaovao, taorian’ny nandanian’ireo Parlemantera roa tonta azy. Ny fankatoavana fampiharana azy avy amin’ny Filohan’ny Repoblika, sisa andrasana aminy. Hanova tanteraka ny tantaran’ny Firenena malagasy io Politikam-pirenen’ny Kolontsaina vaovao io…
Stanislas R. 4 août 2021
« Mifanaraka amin’ny Lalàmpanorenana » raha ny didy navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, ilay Politikam-pirenena momba ny Kolontsaina vaovao. Ny taona 2005, izany hoe tao anatin’ny 16 taona no tsy nananantsika politika nasionaly momba ny Kolontsaina manaraka ny toetrandro sy mifanaraka amin’ny zava-misy iainana ankehitriny, hahafahana mampiroborobo ny kolontsaina eto Madagasikara. Taorian’ny fankatoavana sy ny fandanian’ireo Solombavambahoaka teny anivon’ny Antenimierampirenena ilay Volavolan-dalàna laharana faha 017-2020 tamin’ny 18 Novambra 2020, mifehy ny Politikam-pirenena momba ny Kolontsaina io, sy ny nandanian’ireo Loholona azy ihany koa, dia mazava ankehitriny ny fanovàna lehibe nentina, mifanaraka amin’ny fivoaran’ny fiarahamonina sy ny zava-misy manerana izao tontolo izao, mba hametrahana ny tena maha-izy ara-kolontsaina antsika Malagasy. Endrika kolontsaina maro tsy fafiditra tao anatin’ilay politikam-pirenena teo aloha no nampidirina tao anatin’ny vaovao ity, ka anisan’izany ny politikam-pirenena momba ny teny, izay tsy nahazo vahana loatra ka tsy ampy ny fampiroboroboana azy hatramin’izay. Ankehitriny, manana Politikam-pirenena momba ny teny isika. Ao anatin’izany lalàna vaovao izany koa ny fankatoavana ny maha marolafy ny Kolontsaina malagasy (pluralisme culturel), izany hoe betsaka ny harena ara-kolontsaintsika isam-paritra, izay tsy nisongadina vokatry ny tsy fahafantaran’ny avy amin’ny faritra hafa ny harena ara- kolontsaina ananan’ny hafa. Izany fahasamihafan’ny kolontsaina isam-paritra izany no anisany misongadina anatin’io Politikam-pirenen’ny Kolontsaina vaovao io.
Nahazo fenitra araka ny lalàna ny « Tagnamaro »
Anisany goavana ao anatin’io Politikam-pirenena momba ny kolontsaina vaovao io koa ny fametrahana ny fiaraha-mientan’ny olom-pirenena ho an’ny soa iombonana, ilay antsoina hoe « Tagnamaro ». Samy resy lahatra, ary nahatsapa ny lanja sy ireo soa iombonana azo avy tamin’izany ny ambanilanitr’i Gasikara. Zava-tsoa maro no nentin’io kolontsaina vaovao napetraky ny minisiteran’ny Serasera sy ny kolontsaina ho soa iombonanana avy amin’ny fifanampian’ny maro io. Ankehitriny, nahazo fenitra araka ny lalàna ny « Tagnamaro », entina hanatrarana ny tanjona tiana hahatongavana dia ny fikoloana indray ny maha olom-pirenena vanona ny Malagasy, avy amin’ny fametrahana ny soa iombonana ho zava-dehibe indrindra. Ny finiavan’ny tsirairay mahatsapa ho olom-pirenena no amporisihan’ny minisitera hatrany, ho amin’ny fanatsarana ny manodidina sy ny tontolo iainana.
Ho matihanina ary hisongadina ny Artista malagasy…
Fa ankoatra ny fiarovana ny kolontsaina sy ny harem-bakoka malagasy, ny fanomezana tosika ny sehatry ny sarimihetsika sy ny sarimiaina eto Madagasikara, dia anisany mametraka ny maha matihanina ny Artista malagasy ka hahafahany misitraka tombontsoa maro amin’ny alalan’ny fametrahana ny satan’ny mpanakanto sy ny sisa ihany koa, io Politikam-pirenen’ny kolontsaina vaovao io. Zava-dehibe ary tombony goavana ho an’ireo Artista rehetra tsy an-kanavaka manerana an’i Madagasikara ny fananana io Politikam-pirenen’ny Kolontsaina io. Anisan’izany ny hahazoan’izy ireo Sata mifehy amin’ny maha mpanakanto, hahafahana mametraka ny maha matihanina ireo artista, ary hahafahana mitsinjo azy amin’ny fisitrahana fiantohana sy « Cnaps », izay tsy mbola nisy teto amin’ny tany sy ny firenena hatramin’izay, ka handraisan’izy ireo volan-jaza sy fisotroan-dronono ary fiantohana eo am-perinasa raha tojo loza tampoka. Araka izany, fanatsarana goavana no hoentin’ny Politikam-pirenen’ny Kolontsaina io eto Madagasikara.
LAVANILA EFA VOAKARAKARA: Vidiny tsy mbola manan-kery no niniana naparitaka
VIDIN-TSOLIKA MANERAN-TANY: Nahitana fiakarany, mety hisy fiantraikany amin’ny vidiny eto an-toerana